झलनाथ खनालको त भाग्य नै बलियो, गठबन्धनबीच भयो बोल्ड सहमती ! – GALAXY
झलनाथ खनालको त भाग्य नै बलियो, गठबन्धनबीच भयो बोल्ड सहमती !
काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउन लागिएको खबर बाहिरिएको छ । खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमती मोटामोटी रुपमा भइसकेको गठबन्धन निकट स्रोतले दाबी गरेको हो ।
खनालले केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएर आफुहरुलाई केही फरक नपरेको जिकिर गरेका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी निर्वाचनमा अहिले विद्यमान रहेको पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने विश्वास दिलाए ।
उनले भने,‘सकेसम्म हामी पाँच दलीय गठबन्धन कायम गरेर निर्वाचनमा जान्छौं ।’ उनले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाए । नेपालले एमसीसी सम्झौता गर्दा अपरिपक्वता भएको उनको टिप्पणी छ ।
पत्रकार धमलाले तपाईँ राष्ट्रपति बन्ने भनेर गठबन्धनको बीचमा सहमति भएको हो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता खनालले भने–‘मलाई थाहा छैन, त्यो चाहीँ परिस्थितिले के के सम्भावना बढाएर ल्याउँछ, त्यसलाई समात्ने कुरा हुनसक्ला । अहिले म त सामान्य रुपले उपचार गरेर आएको छु । राम्रो स्वास्थ्य बनेको छ । बन्दैछ ।